ထိပ်တန်းမင်းသမီးမဖြစ်လာခင်က သူတို့ဘာအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြလဲ ? - Myanmarload
ထိပ်တန်းမင်းသမီးမဖြစ်လာခင်က သူတို့ဘာအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြလဲ ?
လွန်ခဲ့သော ၁ နှစ် က 22:39 August 31, 2018
အနုပညာလောကမှာ ကံ နဲ့ စန်းဆိုတာ ပြောလို့မရပါဘူး ။ ခုချိန်မှာသာမန်လူဖြစ်နေပေမယ့် နောက်တစ်နှစ်မှာတော့ ဒိတ်ဒိတ်ကျဲအောင်မြင်သူဖြစ်ချင်ဖြစ်နေနိုင်တာမျိုးပါ ။ လက်ရှိ ထိပ်တန်းရောက်နေတဲ့မင်းသမီးတွေဟာလည်း တစ်ချိန်က သာမန်လူဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ် ။ သူတို့မအောင်မြင်ခင်က ဘာတွေလုပ်ခဲ့ကြလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာမို့ စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် ။
Kim Nam Joo – Civil Servant
သူမကတော့ Gyeonggi အပိုင်းမှာရှိတဲ့ မှတ်တမ်းရုံးတစ်ခုမှာ စာရင်းကောက်သူလုပ်ခဲ့ပါတယ် ။ Survey ကောက်သလိုပုံစံမျိုးဖြစ်မယ်ထင်တာပဲ ။ နောက်ပိုင်းမှာတော့
Miss ၀င်အရွေးခံပြီးနောက် နာမည်ကျော်ကြားမယ့် လမ်းကြောင်းပေါ်ကို ရောက်ရှိ်ခဲ့သူပါ ။
Kim Tae Ri – Soy milk Seller
Kim Tae Ri ကတော့ အရင်က ပဲနို့ရောင်းခဲ့သူပါ ။ အခြား အချိန်ပိုင်းအလုပ်များစွာကိုလည်း လုပ်ခဲ့ရပါတယ် ။
Suzy – Fitting Model
ကိုရီးယားရဲ့ ဒိတ်ဒိတ်ကျဲ အလှပဂေးပါ ။ သူမကတော့ အလယ်တန်းကျောင်းသူဘဝထဲက Photo Model တစ်ယောက်အဖြစ် စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ သူမက ငယ်ငယ်ထဲက Popular ဖြစ်ခဲ့သူပါ ။ သူ့ကို propose လုပ်ခဲ့သူတွေအများကြီးပါပဲတဲ့ ။
Oh Yoon Ah – Racing Model
အနုပညာအလုပ်ကို လျှောက်လမ်းပေါ်က ဖက်ရှင်မော်ဒယ်တစ်ယောက်အဖြစ်စတင်ခဲ့ပါတယ် ။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ သူမလဲ နာမည်ကျော် မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်လာတော့တာပါပဲ ။
Lee Yoo Young – Hair Salon Staff
သူမကတော့ ဆံသဆိုင်မှာ ၀န်ထမ်းလုပ်ခဲ့တာပါ ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ခုနစ်နှစ်က ဆံသဆိုင်က ၀န်ထမ်းလေးတစ်ယောက်က အခုချိန်မှာတော့ ဒိတ်ဒိတ်ကျဲမင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ ။
ee Si Young – Sauna Mart Owner
သူမကတော့ ၀န်ထမ်းမဟုတ်ပါဘူး ။ ကိုယ်ပိုင် ချွေးထုတ်ခန်းကလေးတစ်ခု ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ် ။
သူမကတော့ ခုချိန်မှာသူမဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့ မင်းသမီးတင်မက Boxer အားကစားသမားတစ်ယောက်ပါဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ ။
Choa – IPTV salesperson
မင်းသမီးမဖြစ်ခင်က သူမက အရောင်းသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။ သူမရဲ့ ဠာနမှာ ပထမအမြဲချိတ်အောင် ရောင်းနိုင်ခဲ့သူပါတဲ့ ။ အပြောကောင်းမယ့်ပုံပဲနော် ။
Pyo Ye Jin – Flight attendant
လေယာဉ်မယ်မလေးကနေ မင်းသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့သူပါ ။ လှတာတော့ ပြောမနေပါနဲ့တော့ ။
Han Ye Seul – Reporter
သတင်းထောက်ဘဝကနေ မင်းသမီးဖြစ်လာသူပါ ။ သတင်းထောက်ဘဝကလာတော့ Media တွေနဲ့ ဆက်ဆံရေးအလွန်ကောင်းတဲ့ မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်ပါတယ် ။
ပရိတ်သတ်တို့ရေ ... သူတို့လဲ မအောင်မြင်ခင်က ပုံမှန်အလုပ်တွေကိုလုပ်ကိုင်ရင်း ပုံမှန်ဘဝနဲ့ ဖြတ်သန်းနေခဲ့ကြသူတွေပါ ။ ကံတရားမျက်နှာသာပေးစဉ်မှာတော့ ဒိတ်ဒိတ်ကျဲတွေအောင်မြင်ကျော်ကြားသွားကြပါတယ် ။ ဒါကြောင့်မို့ ဖြစ်ချင်တဲ့ အိပ်မက်တွေ မဖြစ်လာသေးရင် အားမလျော့လိုက်ကြပါနဲ့နော် ။ အခွင့်အရေးတွေ ရှိနေသေးတာမို့ပါ ...
သတင်းအရင်းမြစ် : soompi
Page generated in 0.1762 seconds with5database query and6memcached query.